जनयुद्धकी मोनालिसा अर्थात् जुना रार्इ
रकम चामलिङ । जनयुद्धकी मोनालिसा अर्थात् जुना पुमा रार्इ । अरु कोहि नभएर तत्काल जनयुद्धमा होमिएकी र हाल नेपाली सेनामा कार्यरत भर्इ राष्ट्रसेवक हुन् ।
साबिक सुन्तले गाबिस- ३ साकुमा खोटाङ कुमार राईको माइली श्रीमती पट्टीको ३ सन्तान मध्ये जेठी छोरी हुन् । जुना र गुना दिदिबहिनी तत्कालीन जनयुद्ध आकासिदै जाँदा २०६० बैशाख २१ गतेसँगै एकैसाथ होमिए लडाकुको रुपमा । ती दुई दिदीबहिनीका स्वयम् दाजु भुवन भने तत्कालीन शाही सेनामा नै कार्यरत थियो । सम्भवत राज्यको र बिद्रोही सेना दुवैको प्रतिनिधित्व गर्ने एकै आमाका सन्तानहरु दाजु र बैनी थिए । एकै आमाका सन्तानहरूको बारेमा थाहा पाएपछि फ्रान्सेली पत्रकारहरूसहित पत्रकार सागर श्रेष्ठ लगायत त्यता पुगे ।
विश्व बिख्यात अल्ट्रा धाविका र अयोग्य भनेर हटाइएकी लडाकु मिरा राईको कमान्डर समेत रहेकी प्लाटुन कमान्डरको रुपमा तत्कालीन जनमुक्ती सेनामा हैसियत बनाएकी रार्इले मुख्यरुपमा प्रहरी थाना लहान, भोजपुर रिपिटर टावर (शाहीसेना), घोडेटार (शाहीसेना), बन्दिपुर सर्लाही (शाही सेना), दिक्तेल बजार (शाहीसेना) आदि कब्जा गर्ने क्रममा सहभागिता र दर्जनौं भिडन्तहरु सामना गरेकी थिइन् ।
संखुवासभा खाँदबारीका पुर्व लडाकु कुमार तामाङ (क. संजिब) सँग बैबाहिक बन्धनमा बाँधिएकी र एक छोरोको आमा, जनमुक्ती सेनाको शिबिर दुधौलि सिन्धुलीमा हुँदा सेना समायोजन अन्तर्गत नेपाली सेनामा प्रबेश गरेकी थिइन् । जुना अहिले श्री नम्बर २ बन तथा पर्यावरण सुरक्षा गण नवलपरासीमा हवल्दारको रुपमा कार्यरत छिन् भने उनका दाजु भुवन पनि नेपाली सेनामै कार्यरत छन् । जुनाका बैनी र सहयोद्वय गुना (क. सुजाता) ले भने स्वऐच्छिक अबकाश लिएकी छिन् । यो सुखद अन्त्य नै मान्नु पर्छ कि दाजु बैनी दुवै "नेपाली सेना" मा रहेर राष्ट्रको सेवामा समर्पित छन् ।
जुना राई तत्काल कार्यरत स्थान दिक्तेल र भोजपुर जिल्लाको सिमाना र अत्यन्त चिसो मौसममा २०६१ सालतिर अन्तर्वार्ता र बसाईको क्रममा खिचिएको तस्विर ।
संभवत केही अन्तर्राष्ट्रिय अंग्रेजी पत्रिकामा यो तस्विर सहितको आलेख प्रकाशित छन् युट्युबमा डकुमेन्ट्री समेत छन् ।